Marmaray စီမံကိန်း။ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
သူသည် Marmaray Project မှတရာနှစ်စီမံကိန်းကိုဖော်ပြထား9ပြင်းထန်မှု၏ငလျင်လှုပ်ကိုဆီးတားတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, ကျွန်း၏အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Marmara ပင်လယ်ပြင်၏အရှေ့ဘက်တိုးချဲ့အကြောင်းကို 20 ကီလိုမီတာမြောက်ကိုရီးယား Anatolian ပြတ်ရွေ့ကနေဖြစ်ပါတယ်။ [ပို ... ]
Marmaray Haritası : Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım imkanları sunabilmesi, kentin doğal tarihi [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် silhouette နောက်တဖန်ပုံသဏ္ဍာန်တာဖြစ်ပါတယ်
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Raillife dergisinin Temmuz ayı sayısında “İstanbul’un Silueti Tekrar Şekilleniyor” başlıklı yazısı yayımlandı. İŞTE BAKAN TURHAN’IN YAZISI Zamana, mekâna dolayısıyla da tarihe mühür vurmak [ပို ... ]
အဆိုပါ 478 ယူရိုသန်းTakılılအဆိုပါ Marmaray ရထား Fiasco အတွက်
ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတ်ကြေးရထားလမ်းစနစ်ကသိမ်းထားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင့် Marmaray များအတွက်မီးရထားစုံ၏ယူရိုတန်ဖိုးရှိသန်းပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရရှိမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကြောင်းဖန်ဆင်းခြင်းအရေးဆိုမှုအတွက်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Turhan "သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု" အများပြည်သူအရှုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် [ပို ... ]
အာရှ - ဥရောပစင်္ကြံကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးပမ်းသော 76 km Marmaray စီမံကိန်းကိုမနေ့ကစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသည် Marmaray စီမံကိန်း၏အဓိကဇာတ်စင်, အာရှဥရောပစင်္ကြံချိတ်ဆက်ရန်ပဏာမခြေလှမ်းသမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
TÜVASAŞ’ta metro, tramvay, hafif raylı taşıt, banliyö ve diğer raylı sistem araçları ile ilgili farklı üretim stratejileri izlenmektedir. Bu projelerde uluslararası firmalarla ortak üretim çerçevesinde yer alınmaktadır. Bu kapsamda, 2001 [ပို ... ]
အချို့သောပိတ်ထားသော Marmaray Separation ရေပန်းဘူတာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့
Marmaray’da entegrasyon, sinyalizasyon ve test çalışmaları nedeniyle Ayrılık Çeşmesi İstasyonu 21 Ocak tarihinden beri kapalı. 75 km’lik Marmaray entegrasyon çalışmalarının 2018 Aralık ayında son bulması bekleniyordu. Ancak Ankara’da yaşanan tren [ပို ... ]
Florya Fıtrat Da Mu အတွက်ရထား၏ Collision တွင်ဦးခေါင်း?
အစ္စတန်ဘူလ် Sirkeci- အတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကHalkalı ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းရှိစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုအတွင်းရထားလမ်းယာဉ်နှစ်စီးတိုက် မိ၍ တိုက်မိပြီးနောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီး Cahit Turhan ကထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက်အလီ [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (344) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)